Access created by th - İngilizce - Birmanca Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: access created by the change (İngilizce - Birmanca)
ထိုသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ငါတို့သည် ရဲရင့်သောစိတ်နှင့်တိုးဝင်၍ အသနားတော်ခံရသော အခွင့်ကိုရကြပြီ။
စက်မှ မြင်ရသည့် အိုင်ပီလိပ်စာ
ဤရုပ်သွင်ဖွဲ့စည်းပုံကို ဗိုင်းရပ်စ်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ပရိုတိန်းများဖြစ်သည့် ဗိုင်းရပ်စ် ဆူးချွန် ပပ်ပလိုမာများဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။
Sets the browser used by the help system.
အကူအညီ နည်းစနစ်မှ သုံးစွဲတဲ့ ကွန်ရက်ကြည့် ယန္တရားကို သတ်မှတ်ပါ။
In early September 2012, there wasaminor furor over an alleged proposal by the Opposition to change the Malaysian flag.
၂​၀​၁​၂ ခု​နှစ် စက်တင်ဘာ​လ အစော​ပိုင်း​တွင် အတိုက်​အခံ​ပါ​တီ​၏ မလေးရှား​နိုင်ငံ​အလံ​ကို​ပြောင်းလဲ​ရန် တင်​သွင်း​သည်​ဟု ယူဆ​ရ​သော အဆို​အပေါ် အုတ်အော်​သောင်း​နင်း​အနည်းငယ် ဖြစ်ပွား​ခဲ့​သည်။
View the output produced by the last executed command
Around 600 satellite channels were shut down by the army.
အနီးနားချင်းများဘက်မှ မြင်ရသည့် အိုင်ပီလိပ်စာ
The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority
အသိအမှတ်ပြုလွှာကို အသိအမှတ်ပြုပိုင်ခွင့်ရှိသူမှ ပြန်ရုတ်သိမ်းထားသည်။
အဘယ်သို့သော ပညတ်တို့ကို သခင်ယေရှု၏အခွင့်တော်နှင့် ငါတို့သည်အပ်ပေးသည်ကို သင်တို့သိကြ ၏။
ဧလိမ်ရွာမှပြောင်း၍ ဧဒုံပင်လယ်နားမှာ စားခန်း ချကြ၏။
A detailed list of entry restrictions is maintained by the IATA.
ပြည်ဝင်ခွင့် ကန့်သတ်ချက်များ၏ အသေးစိတ်စာရင်းကို IATA မှ ထိန်းသိမ်းထားသည်။
စကားပြောဆာဗာမှ မှတ်ပုံတင်ကို စိစစ်အတည်ပြုလို့ မရပါ။
This is not supported by the current active burning backend.
နောက်ကွယ်မှ ဒေတာရိုက်ယူခြင်းကို အထောက်အပံ့မပေးနိုင်ပါ
my younger piste name veena (İngilizce>Hintçe)caución (İspanyolca>Fince)kamusta ka?tagalog kapampangan translator (İngilizce>Tagalogca)bolang ka ne (İngilizce>Tagalogca)sesame seeds (İngilizce>Portekizce)ウェストバージニア州 (Japonca>İngilizce)salvete spectatores (Latince>Almanca)jangan jadi orang yang tak ada pelajaran (Malayca>İngilizce)tum kitne sal ke ho (Hintçe>İngilizce)reverso (Latince>Fransızca)i lose interest when i get ignore (İngilizce>Malayca)un mal pour un bien? (Fransızca>İngilizce)maneo nomini (Latince>İspanyolca)dil na lagana (Hintçe>İngilizce)confusio (Latince>Fransızca)mai kal market gayi thi (Hintçe>İngilizce)siil iyo gus isku jira (Somalice>İngilizce)essudazione (İtalyanca>Romence)tagalog to bicol translation (İngilizce>Tagalogca)privatizo (İspanyolca>Çince (Modern))maksud forawhile (İngilizce>Malayca)dominus deprecemur te rogamus audi nos (Latince>İtalyanca)sinoniem vir kandelaar (Afrikanca>İngilizce)kasi im seeking for you time (İngilizce>Tagalogca)kötvénykibocsátás (Macarca>Letonca)